Ngake ngakhetha izimpahla ezisezingeni eliphezulu ukuba zibe sendlini Yami, ukuze kuzo kube nomcebo ongaqhathaniseki, ngalokho bewuzohlotshiswa, lapho ngiyithole khona injabulo. Kodwa ngenxa yesimo sengqondo somuntu Kimi, kanye nangenxa yezisusa zabantu, angibanga nakho okunye ebengingakwenza ngaphandle kokuwubeka eceleni lo msebenzi ngenze omunye. Ngizosebenzisa izisusa zomuntu ukuba ngifeze umsebenzi Wami, ngizongenelela zonke izinto ukuba zingisebenzele, bese ngenza indlu Yami ukuthi ingabi nosizi nomzwangedwa ngesizathu salokho. Ngake ngaqaphela kubantu: konke okwakuyinyama negazi kwakungenalutho, akukho neyodwa into eyasizwa isibusiso sobukhona Bami. Abantu bahlala nazo izibusiso kodwa abazi ukuthi babusiseke kanjani. Uma izibusiso Zami kumuntu bezingekho kuze kube namuhla, ngubani kubantu obengaphila kuze kube yilesi sikhathi samanje engashabalalanga? Ukuthi umuntu uyaphila yisibusiso Sami, futhi kusho ukuthi uphila nazo izibusiso Zami, ngoba kwasekuqaleni wayengenalutho, ngoba kwasekuqaleni wayengenamali ukuba aphile phakathi komhlaba nezulu; namuhla ngiyaqhubeka nokumsiza umuntu, kungenxa yalokhu kodwa futhi ukuthi umuntu uyema phambi Kwami, enenhlanhla ukuphunyula ekufeni. Abantu bafinyezile imfihlakalo yokuba khona komuntu, kodwa akekho okwazile ukuqonda ukuthi lesi yisibusiso Sami. Ngaleso sizathu, bonke abantu bayakuqalekisa ukungabibikho kobulungiswa emhlabeni, bonke bakhononda Ngami ngenxa yokungajabuli ezimpilweni zabo. Uma kungekhona ukuthi kungenxa yezibusiso Zami, ngubani obeyolibona inamuhla? Abantu bonke bayakhononda Ngami ngoba abakwazi ukuphila ekunethezekeni. Uma impilo yomuntu beyikhazimula inomoya ohelezayo, uma “umoya wentwasahlobo” bewuthunyelwe enhliziyweni yomuntu, wakha ubumnandi obungalinganiseki emzimbeni wakhe wonke, umshiya engenabo nobuncane ubuhlungu, ngubani kubantu obezofa engabalisi? Ngihlangabezana nobunzima ukuzuza ubuqotho bangempela bomuntu, ngokuba abantu banezinhlelo eziningi kakhulu ezingeqotho—ezanele, ngokulula nje, ukwenza ikhanda lomuntu liphenduphenduke. Kodwa uma ngiphakamisa ukungemukeli Kwami kubo, banginika ihlombe elibandayo, abanginaki, ngokuba ukugxeka Kwami kuthintile imiphefumulo yabo, kubashiya bengakwazi ukukhanyiseleka kusukela ekhanda kuya ozwaneni, ngakho abantu bayabenyanya ubukhona Bami, ngokuba ngithanda “ukubahlupha” njalo. Ngenxa yamazwi Ami, abantu bacula badanse, ngenxa yamazwi Ami, behlisa amakhanda abo bathule, bese kuthi ngenxa yamazwi Ami, baphubuke balile. Emazwini Ami, abantu balahla ithemba, emazwini Ami, bathola ukukhanya kokuqhubeka nokuphila, ngenxa yamazwi Ami, bayaphenduphenduka, bengalali imini nobusuku, futhi ngenxa yamazwi Ami, bayaphuthuma yonke indawo. Amazwi Ami adudulela abantu eHayidese, bese ebaphosa kukho ukusolwa—kodwa, ngaphandle kokuqwasha ngalokho, abantu bathokozela nezibusiso Zami. Ngabe lokhu kuyazuzwa na ngumuntu? Bekungeza yini kungukubuyiselwa kwemizamo yabantu engakhathali? Ngubani ongaphunyula ekuhleleni kwamazwi Ami? Ngakho, ngenxa yokwahluleka komuntu, ngehlisela kumuntu amazwi Ami, ngenza ukuba ukweswela komuntu kondliwe ngenxa yamazwi Ami, nginikeza umcebo ongenakulinganiswa empilweni yomuntu.
Ngivame ukucubungula amazwi nezenzo zabantu. Ekuziphatheni kwabo kanye nasezimeni zobuso, ngitholile “izimfihlakalo” eziningi. Ekusebenzisaneni kwabantu nabanye, “kunezindlela eziyimfihlo” ezibambekayo ezinokuziqhenya ngendawo—ngalokho futhi, uma ngibambisana nomuntu, engikuzuzayo “yizindlela eziyimfihlo ekusebenzisaneni nomuntu,” okukhombisa ukuthi umuntu akangithandi. Ngivame ukumyala umuntu ngenxa yokwahluleka kwakhe, nakuba kunjalo anginamandla okuzuza ukwethenjwa nguye. Umuntu akazimisele ukungidedela ngimbulale, ngokuba “izindlela eziyimfihlo zokusebenzisana nomuntu”, akukaze kutholakale ukuthi umuntu uhlushiwe ngenhlekelele ebulalayo—uhlangabezene kuphela nokuhlehliselwa kambalwa emuva ngezikhathi angabanga nanhlanhla ngazo. Abantu bayakhala ngenxa yamazwi Ami, nokucela kwabo kuqukethe ukungigxeka ngokungabi nanhliziyo Kwami. Kungathi bonke bathungatha “uthando” lwangempela Lwami kumuntu—kodwa bangathola kanjani uthando Lwami emazwini Ami anonya? Ngaleso sizathu, bavama ukulahla ithemba ngenxa yamazwi Ami. Kungathi, lapho befunda amazwi Ami, babona “umvuni omubi,” ngalokho baqhaqhazele benokwesaba. Lokhu kungenza ngingajabuli: Kungani abantu benyama, abahlala nakho ukufa, bekwesaba njalo ukufa? Ngabe umuntu nokufa yizitha ezimbi? Kungani uvalo lokufa luvama ukwakha ixhala kubantu? Kukho ukuhlangabezana kwabo nezinto “okungajwayelekile” empilweni yabo, bayahlangabezana yini nokufa okuncane? Kungani, kwabakushoyo, abantu bekhononda Ngami kukho, ngethula kafushane isisho sesine empilweni yomuntu: Abantu bangokuncane kunakho konke ekulalelweni kwemiyalo Yami, ngalokho njalo bayangizonda. Ngenxa yenzondo yomuntu, ngivame ukuhamba. Kungani njalo kufanele ngivuse ukwenyanya kubantu? Kusukela abantu bengabumukeli ubukhona Bami, kungani kufanele ngibe nobuso obunesibindi ngihlale endlini yomuntu? Akukho okunye engingakukhetha ngaphandle kokuthi ngithathe “imithwalo” Yami ngimshiye umuntu. Kodwa abantu abakwazi ukumela ukungidedela, abafuni nakanye ukuthi ngihambe, bayanswininiza bakhale, besaba kakhulu ukuthi ngizohamba, bese belahlekelwa ngabancike kukho ukuba baphile. Ngokubona ukubheka kwabo okunokunqiba, inhliziyo Yami iyathamba. Ndawonye nezilwandle zomhlaba, ngubani onamandla okungithanda? Umuntu wembozeke emanzini angcolile, ugubuzelwe ngamandla olwandle. Ngiyakuzonda ukungalaleli komuntu, nokho ngiba nozwelo ngokungabi nanhlanhla kwesintu sonke—ngokuba umuntu, vele, useyisisulu. Ngingakwenza kanjani ukuthi ngiphonse umuntu emanzini ebe ebuthakathaka engenamandla? Ngabe nginonya ngangokuthi ngiyamkhahlela esephansi? Ngabe inhliziyo Yami inonya kangako? Kungenxa yokuziphatha Kwami ukuthi umuntu ungena kanye Nami kule nkathi, kungenxa yalokhu ukuthi udlulile kulezi zinsuku nobusuku obungajwayelekile ekanye Nami. Namuhla, abantu basebuhlungwini obukhulu benjabulo, banokuqonda okukhudlwana ngothando Lwami, futhi bangithanda ngamandla amakhulu, ngokuba kunomdlandla ezimpilweni zabo, futhi bayekile ukuba ngamadodana olahleko azulazula emikhawulweni yomhlaba.
Ezinsukwini ngiphila nomuntu, abantu bancika Kimi, futhi ngoba ngingowethembekile kubantu kuzo zonke izinto, futhi ngikhuthele ekunakekeleni umuntu, abantu baphila njalo emfudumalweni yokwangiwa Yimi, bengamelani nalutho oluwukupheshulwa wumoya, ukududulwa yimvula, ukushiswa yilanga; abantu baphila kuyo injabulo, kanti bangiphatha njengomama. Abantu bafana nezimbali endlini enohlaza, ngokugcwele bengakwazi ukumela ukuhlaselwa “yizinhlekelele zemvelo,” bengakwazi nakanye ukuma baqine. Ngalokho ngibabeka kukho ukulingwa kanye nokuhlokoma kwezilwandle, bebe bengakwazi ukwenza okunye ngaphandle kokuba “manqikanqika” njalo, abangenawo amandla abambekayo ukumelana nezinto—nangenxa yokuthi isiqu esingokomoya sabo sinokweswela kakhulu kanti nemizimba ibuthakathaka kakhulu, ngizwa nginomuzwa womthwalo omkhulu. Ngakho, ngaphandle kokuqwasha, abantu babhekene nokulingwa Yimi, ngokuba bayizitsha ezifayo, kanti abakwazi ukuwumela umoya ovunguzayo kanye nelanga elishisayo. Akuwona umsebenzi Wami wamanje lona? Kungani uma bebhekene nokulingwa Yimi, abantu njalo baphubuka bakhale izinyembezi? Ngabe ngenza okungebona ubulungiswa? Ngabe ngiyababulala ngamabomu? Kungani isimo somuntu esithandekayo sifa, singabe sisakwazi ukuvuswa? Njalo abantu babamba Mina bangangidedeli; ngokuthi abakaze bakwazi ukuphila ngokwabo, njalo bavumile ukuholwa yisandla Sami, besaba kakhulu ukuthi bangathathwa ngomunye umuntu. Ngabe impilo yabo yonke kayiqondiswa Yimi? Ngezikhathi zempilo yabo emazombezombe, lapho beqa amagquma namathafa, bahlangabezane namazombezombe amakhulu—akuvelanga ngesandla Sami lokhu na? Kungani abantu bengakwazi nakanye ukuqonda inhliziyo Yami kungani izinhloso Zami ezinhle zingaqondwa yibo? Kungani umsebenzi Wami ungakwazi ukuqalwa ngempumelelo emhlabeni? Ngenxa yobuthakathaka bomuntu, njalo bengigwema umuntu, okuletha ubuhlungu obukhulu kimi: Kungani isinyathelo esilandelayo somsebenzi Wami kumuntu singenakufezwa? Ngakho, ngithula du, ngimkala ngokucophelela: Kungani ngiphoqwa ukwahluleka komuntu? Kungani njalo kuneziphazamiso emsebenzini Wami? Namuhla kusafanele ngithole impendulo ephelele kumuntu, ngokuba umuntu njalo upheshulwa ukushisa nokubanda, akabi ngojwayelekile nakanye, kuphakathi kokuthi ungizonda kufika emathanjeni akhe, noma unothando lokugcina Lwami. Mina, uNkulunkulu Uqobo, angikwazi ukumela ukuhlushwa ngumuntu kanje. Ngenxa yokuthi njalo abantu abanawo umqondo ojwayelekile, ngibukeka ngimesaba umuntu, ngakho ukubuka yonke iminyakazo yakhe kungenza ngicabange ngokungejwayeleki kwakhe. Ngiyithole ngingaqondile imfihlakalo yomuntu: Kubukeka sengathi kukhona ungqondongqondo ommele ngemuva; ngaleso sizathu, abantu banesibindi nokuzethemba njalo, kungathi basanda kwenza into evumelekile. Ngakho, abantu njalo bazenza abantu abadala uma bencenga “umntwana omcane.” Ngokubuka ukuzenzisa komuntu, angikwazi ukwenza okunye ngaphandle kokuthi nginengeke: Kungani abantu bengenaluthando futhi bengazihloniphi bona uqobo. Kungani bengaziqondi bona uqobo? Ngabe amazwi Ami adlulile? Ngabe amazwi Ami ayisitha somuntu? Kungani, uma befunda amazwi Ami, abantu baba nokungiduba? Kungani abantu njalo befaka imicabango yabo emazwini Ami? Ngabe kangenzi kahle kubantu? Bonke abantu kumele bacabange kanzima ngalokhu, ngokuthi yini equkethwe ngamazwi Ami.
uNhlaba 24, 1992